Itya iyo Inopenga Magician muTrailer yaScott Derrickson's 'Iyo Nhare mbozha' - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Itya Madhiri Akapenga muTrailer yaScott Derrickson's 'Iyo Nhare mbozha'
Itya Madhiri Akapenga muTrailer yaScott Derrickson's 'Iyo Nhare mbozha'
Joe Hill naScott Derrickson
by Trey Hilburn III October 13, 2021 3,089 maonero
Blumhouse inotevera hombe chimiro Nhare mbozha yakavakirwa pane nyaya yaJoe Hill uye yakashandurwa naC. Robert Cargill naScott Derrickson. Chinhu chinotyisa chinotidzosera kukutya kwekuba kwema 70's uye 80's. Iko kutya kukuru kwakataura kuti mwana wako anogona kuve anotevera kutorwa.
Takaita rombo rakanaka rekuona Nhare mbozha paFantastic Fest uye isu takaida zvachose. Ita shuwa yekutarisa ongororo yedu. Icho chaicho chimwe chinhu icho vateereri vanozoenda kumashure. Zvinotyisa uye zvakasviba kwazvo.
Zvinyorwa zvepamutemo zve Nhare mbozha inoenda seizvi:
Finney Shaw, anonyara asi akangwara mukomana ane makore gumi nematatu ekuberekwa, akapambwa nemhondi ine utsinye ndokubatwa mune yepasi isina mutsindo uko kupopota hakuna zvakunobatsira. Kana nhare yakatemwa pamadziro yakatanga kurira, Finney anoona kuti anonzwa manzwi evakambobatwa nemhondi. Uye ivo vakafira mukuona kuti izvo zvakaitika kwavari hazviitike kuna Finney.
Ethan Hawke anoridza anopenga mun'anga muvha nhema mune iyi uye anoita kudaro zvinotyisa kune mukomana uyo asingawanzo kutamba akaipa. Muchokwadi iyo yose cast yeiyi inoshamisa.
Gadzirira iyo Nhare mbozha kuti inogara mumitambo ino Kukadzi 4.